Tft Display, Character Lcd Display, Graphic Lcd Module - Hengtai (Hong Kong) mizara Co., Ltd.
Amin'izao fotoana izao, ny vokatra LCD dia ampiharin'ny mpanjifa amin'ny sehatra maro toy ny fitaovana, milina lalao, milina fax, telefaona karatra IC, telefaona finday, telefaona fampahalalana, solosaina paleta, fitaovana ara-bola, fitaovana fitsaboana, rafitra fitetezana GPS, fitaovana elektrika mandeha ho azy .
Hongkong Hengtaidia mpamatsy azo antoka ny vokatra fampisehoana kristaly ranoka. Hatramin'ny nananganana azy tamin'ny taona 1996, dia nifantoka tamin'ny fanompoana ny sehatry ny indostria izy, manokana amin'ny famolavolana sy ny famokarana ireo modely LCD indostrialy. Ny vokatra dia manarona endrika kristaly ranoka karazana karazana monochrome, fampisehoana kristaly ranoka karazana dot matrix, ary fisehoana TFT loko.
Mahay manamboatra karazana takelaka LCD samihafa, mari-pana miasa ambany -40 -40, vokatra maripana avo lenta +85, vokatra indostrialy, be mpampiasa amin'ny sehatra isan-karazany toy ny herinaratra, fitsaboana ara-pahasalamana, fitantanam-bola, fampitaovana, automatisation indostrialy, faran'ny POS , mizana elektronika, sns. Ny mpanjifa lehibe dia misy an'i Benz, Audi, Samsung, Toshiba, General Electric ary orinasa malaza iraisam-pirenena hafa.
Kalitao avo, ambany fanjifana herinaratra, fandefasana haingana, vidiny mirary
128 × 64 teboka teboka STN YG 128X64 Fampisehoana Module LCD
240 × 64 24064 24064 UC1699Ugraphics lcd fampisehoana modely
indostrialy 160128 sary lcd modely US1611s fisehoana volondavenona 5v 28-pin 160 × 128 lcd display-TP
240 × 128 Sarimihetsika STN fampisehoana ratsy LCD Module US1608x
6 oclock IC NT7534H-TABF1 12864 STN YG fampitana sary mihetsika COG misy sary LCD monochrome
12864 FSTN positive transflective 6 oclock sary LCD monochrome fampisehoana modely 3 LED COG IC ST7565P
namboarina manokana fizarana LCD monochrome fampisehoana modely
Factory Wholesale Cheapest character lcd fampisehoana modely 20 × 4
12864 STN positive transflective 6 oclock sary LCD monochrome fampisehoana modely 3 LED COG IC SPLC501C
3.5 mirefy 320X240 300nits TN, tsy misy TP, RTPCTP tsy voatery, 54pins CPURGBSPI NV3035C
fampisehoana TN digital lcd nomerika ho an'ny refin'ny tosidra